Ukunakekelwa kweSedum Kamtschaticum: Ukukhula kwe-Stonecrop yaseRussia - Izingadi Zexeriscape
Izitshalo Zasendlini Ezithile
Ukunakekelwa kweSedum Kamtschaticum: Ukukhula kwe-Stonecrop yaseRussia
izinto zokwenza izinwele zakho zikhule ngokushesha
Izinhlobo zeSedum Kamtschaticum
ISedum inikeza aluhlaza ikhava yaphansi amaqabunga ajulile aluhlaza. Isiqu sesitshalo singama-6 ″ ubude. Isikhathi sokuqhakaza kwezimbali ezincane eziphuzi sekwephuzile entwasahlobo naphakathi nehlobo. Umbala wamahlamvu uphendulela ubhedu oluhlaba umxhwele ebusika, kanti izimbali ezihlala isikhathi eside, ezinjengezinkanyezi, neziphuzi zegolide zigcina umbala wazo phakathi nesikhathi sokuqhakaza.
I-Stonecrop Sedum ebekezelela isomiso igcina amahlamvu ayo amise okwezipuni isizini yonke. Lesi sitshalo silungele ukukhula phakathi kwezindlela zamatshe noma phakathi izingadi ze-xeriscape . Lesi sitshalo sinokuhlukahluka okuhlukahlukene kwe-pop yombala.
Umbala ophuzi uyisici esiyisisekelo salolu hlobo. Umthombo:
Amagama ajwayelekile: I-stonecrop yase-Orange, i-stonecrop yaseRussia, iKamschatka sedum
Igama Lesayensi ISedum
Ukuphakama nokusabalala: Ubude obungu-4-6 ″ nobubanzi obungu-1-2 '
Khanyisa Ilanga eligcwele ukuya emthunzini oyingxenye
Umhlabathi Ukubekezelela izinhlobo eziningi
Izinambuzane nezifo: Izinkinga zesikhunta futhi zibole uma ziniselwa kakhulu
Saziwa nangokuthi iRussia Stonecrop, lesi sitshalo sikhula esidabuka ezintabeni ezinamadwala kulo lonke elaseJapane nakwezinye izifunda zase-Asia. Ungayikhulisa njengesembozo somhlabathi njengoba inombala omuhle wamahlamvu nombala wembali okhangayo. Iyabekezelela isomiso, ngakho-ke ungayikhulisa emifantwini yezindonga zakho. Izinga lokukhula kwalesi sitshalo liyashesha impela. Lesi sitshalo siphinde simelane nezinyamazane nonogwaja.
Kunezinhlobo ezimbili okufanele uziqaphele:
I-Kamtschaticum sedum - amaqabunga aluhlaza futhi anombala ophuzi wezimbali.
I-Sedum kamtschaticum 'Variegatum' - amaqabunga aluhlaza anemingcele emhlophe e-creamy.
Kwenzela umngcele omuhle kakhulu noma isitshalo se-xeriscape. Umthombo:
Zikhula kahle kakhulu ngaphansi kwelanga eligcwele, kepha zingakhula ngomthunzi oyingxenye engadini yakho - uma nje ithola amahora ayisithupha okukhanya kwelanga okugcwele emini. Isitshalo sakho singachuma ku-USDA Hardiness Zones 4 kuya ku-9. Izinga lokushisa eliphansi kakhulu elingasibekezelela ngu -20 ° F.
isisombululo esijwayelekile sokuxebula senzani
Sebenzisa indlela yokucwilisa neyomile. Cwilisa isitshalo sakho bese ulinda inhlabathi ukuthi yome ngokuphelele ngaphambi kokuyinisela futhi. Izitshalo ezivuthiwe ziyabekezelela isomiso - zingahamba ngaphandle kwamanzi izinyanga ezimbalwa.
Uncamela ukukhula enhlabathini ekhanywa kahle, eyomile futhi empofu.
Lezi zitshalo azidingi umanyolo owengeziwe ngoba zithanda inhlabathi empofu neyomile.
Ungatshala izitshalo zakho ezithengwe esitolo emhlabathini okhulula mahhala ezitsheni ezinezimbobo zamanzi, noma uzitshale engadini yakho. Beka izitshalo zakho zihlukane ngamasentimitha angu-9 kuya ku-12 ngoba zidinga isikhala sokucaba phansi ngama-rhizomes amafushane.
Ungasabalalisa isitshalo sakho ngokuhlukanisa njalo eminyakeni emibili kuya kwemithathu. Le nqubo ilula futhi kufanele yenziwe entwasahlobo noma ekuqaleni kwehlobo. Ungatshala ukwahlukana okukhudlwana ngqo ezindaweni zazo ezihlala njalo bese ukhulisa ezincane ngohlaka olubandayo.
Unganciphisa iziqu namaqoqo afile ezinhloko zezimbali zesitshalo sakho ekuqaleni kwentwasahlobo. Ekuqaleni kwehlobo, phinda ubuyisele izinhlobo ezinde zesitshalo sakho esikhulile ngesigamu ukuvimbela ukuhlukana.
Isilinganiso sebele se-45: 55
Musa ukunisela kakhulu isitshalo sakho phakathi nobusika njengoba inhlabathi emanzi izobulala isitshalo sakho. Umthunzi omningi awulungele i-palnt yakho, ngakho-ke hlinzeka okungenani amahora ayisithupha okukhanya kwelanga usuku lonke.
Cishe ayinazinambuzane, kepha ingenwa yizifo ezimbalwa.
Isitshalo sakho singahlushwa izifo zokukhunta nokubola kwezimpande, ngakho-ke qiniseka ukuthi awusiniseli ngokweqile futhi usebenzise inhlabathi ekhishwe kahle. Ungaxuba ama-pumice angama-50%, isihlabathi esimahhadlahhadla, noma perlite ukungena enhlabathini ukuvikela lezi zifo.
i-lana del rey imask mask
U. Uyinakekela kanjani i-Stonecrop yaseRussia?
A. Khulisa isitshalo sakho elangeni eligcwele, umhlabathi ovundile ngokulingene, owomile, onisele kahle. Yinamanzise ngezikhathi ezithile futhi uyivikele ekucheleni ngokweqile ngesikhathi sasebusika.
U. Ingabe u-Angelina Sedum uyaqhakaza?
A. Lezi zitshalo ziqhakaza izimbali eziphuzi, ezimise okwezinkanyezi kusukela maphakathi kuya ngasekupheleni kwehlobo.
Izimpawu Ezi-6 Ungumuntu Olandela Umdwebo
Amaphunga Amasha Kahle Ka-Fall 2018
Izinto ezi-3 Ezingakwenza Uzizwe Ngempela Uzolile
Izinto Eziyi-8 Abafana Abathi Bayazizonda Ngabantu Besifazane kodwa Uthando Oluyimfihlo
Ungayithola Kanjani Ingubo Yomshado Efanelekile Ngohlobo Lomzimba Wakho
iyiphi insipho oyisebenzisela insipho brows
eziqongweni zesudi yokugeza enemikhono
ngingayitholaphi i-wax ye-brazillian
ubhodisi wezemidlalo ongcono kakhulu wesifuba esincane
Imininingwane © Wonke Amalungelo Agodliwe | cottage-home-and-garden.com